प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहेका नेता हुन् । नेपाली कांग्रेस सरकारमा रहँदा उनले गृह, भौतिक पूर्वाधार लगायतका मन्त्रालय सम्हालिसकेका नेता निधि पार्टी भित्र प्रभावशाली मानिन्छन् । सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकिरहेको भन्दै आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा नेता निधिसँग लोकान्तर प्रतिनिधिअजय अनुरागीले समसामयीक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादीत अंश
देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी लिनु भएको छ ?
देशको राजनीतिक अवस्था अहिले धेरै खराब छ । संविधान त जारी भयो । धेरै अपेक्षाका साथ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान लागू भयो । देशमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तह गरी तीनै तहको चुनाव भयो । तर त्यति मात्र काफी थिएन । सबैलाई थाहा छ देशमा अहिले सात वटा प्रदेश छ । तर, कुनै पनि प्रदेशमा प्रहरी संगठन, नीजामति प्रशासन, निजामति कर्मचारी छैन । सिडियो र प्रहरी मुख्यमन्त्रीको मातहतमा आउँन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विदा घोषणा गर्छ तर ती कार्यालयहरुमा लागू हुँदैन । शिक्षा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, मालपोत कार्यालय, मजदुर किसान संग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने कार्यालयहरु प्रदेश मातहत अझै पनि आएको छैन । संघीय कानून बनेको छैन ।
अहिले २ नम्बर प्रदेशकै कुरा गर्ने हो भने प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गर्यो । तर, केन्द्रिय सरकार र सत्ता पक्ष कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रिय नेताले मुख्यमन्त्रीलाई उल्टै धम्की दिइरहेका छन् । खबरदार दुर्घटना हुन्छ भन्दै धम्की दिईरहेका छन् । यो त अत्यन्तै अनर्गल र आपत्तिजनक कुरा हो । संघीय प्रणालीमा प्रान्तीय सरकार, मुख्यमन्त्री संघीय सरकारको दास र नोकर हुँदैन भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो । नेकपाका नेताले यसरी व्यवहार गरिरहेको छ कि ऊ मालिक हो र प्रदेश सरकार दास हो । यस्तो भयो भने संघीय प्रणालीको त कुनै अर्थ नै भएन ।
जनताको मत कम्युनिष्ट पार्टीले प्राप्त गर्यो । देशमा संघीय शासनको ड्राईवर कम्युनिष्ट पार्टी बनेको छ जसले संघीयतालाई पत्याउँदैन । कम्युनिष्ट पार्टी संघीयता विरोधी पार्टी हो । त्यसैले अहिले संघीय शासन प्रणाली नै खतरामा परेको छ । आजको मितिमा देशको राजनीतिक शासन प्रणाली खतरामा छ । जनता गम्भीर र सचेत हुनुपर्छ ।
हामी जनतालाई सचेत गराउँदै प्रमाणित गर्न चाहन्छौं कि आठ महिनामा सरकारले केही पनि गरेको छैन
तपार्इं पूर्व गृहमन्त्री पनि हो । निर्मला पन्तको बलात्कार गरेर हत्या गरिएको अपराधि समेत पक्राउ गर्न सकिएको छैन । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको कार्यकाललाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
गृहमन्त्री मात्रै होईन सम्पूर्ण सरकारकै कामकाज राम्रो हुन सकेको छैन । देशमा शान्ति व्यवस्थाको राम्रो अवस्था छैन । अपराध भइरहेको छ, अपराधीहरु पक्राउ पर्न सकिरहेको छैन । बलात्कार र हत्या यस्तो अपराध भयो जो कि हरेक दिन भइरहेको छ । खाली त्यसैको समाचार आइरहेको छ । अहिले जानकारीमा आएको छ कि पन्त घटनामा एसपीलाई बर्खास्त गरेको छ । त्यो पनि भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी । बर्खास्त गर्नु एउटा कुरा तर अपराधी को हो, एसपी नै हो वा अरु कोही हो भन्ने कुराको स्पष्ट किटानी त अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । त्यो सरकारकै कमी कमजोरी हो ।
नेपाली कांग्रेस अहिले संघीय संसदमा र देशैभरी प्रतिपक्षमा छ । तर, कांग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा पनि यो अवस्था आईरहेको भनेर विश्लेषण भईरहेको छ नि ?
प्रतिपक्षले कुरा उठाउने नै हो । हामीले जनताका कुरा सधै उठाउँदै आइरहेका छौं । हामीले कुर्सी त तोड्ने होइन । विगतमा सदनमा कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिपक्षमा भएको बेला कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदले सदनमा कुर्सी तोड्थ्यो । कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरु काठमाडौंका सडकहरुमा रहेका रेलिङ भत्काउँथे । हामी त्यस्तो गर्दैनौं । हामी लोकतान्त्रिक पार्टी हौं । हामी हिंसा, तोडफोड आदिको बाटो अपनाउँदैनौं । जनताले पाँच वर्षका लागि कम्युनिस्ट सरकारलाई जनादेश दियो । त्यसको हामी सम्मान गर्दछौं । यसको मतलव यो होइन कि हामी कमजोर छौं । अब हामी जनतालाई सचेत गराउँदै प्रमाणित गर्न चाहन्छौं कि आठ महिनामा सरकारले केही पनि गरेको छैन ।
संघीयताका लागि चाहिने कानून समेत बनाउन सकेको छैन । जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित सामग्रीहरु सहज रुपले पुर्याउनुपर्ने दायित्व समेत पुरा गर्न सकेको छैन । महँगी बढेको छ । सरकारले खाली उखान टुक्का पढेर जनतालाई भ्रमित गर्ने काम गरेको छ । पहिले पाइप लाइनमा ग्यास घर घरमा पुर्याउने भनियो, तर अब भनिरहनु भएको छ कि जनताको भान्सामा विजुलीको लाइन पुर्याइदिन्छु । त्यसैले अहिले हामीले जनतालाई यी सबै कुराहरु भनिरहेका छौं । जनता जब तयार हुुन्छ त्यसपछि हामीले आन्दोलन पनि गर्न सक्छौं ।
सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्ने तयारी छ, भन्नु भएको हो ?
अहिले हामी सरकारको गलत क्रियाकलाप बारे जनतालाई बताइरहेका छौं । यस्तो कुनै दिन नै छैन कि कम से कम आज सरकारले राम्रो काम गर्यो । प्रत्येक दिन विहान जब एफएम, रेडियो, पत्रपत्रिका, टिभीबाट समाचार सुन्दा, पढ्दा सरकारले कुनै एउटा राम्रो काम गर्यो भनेर पढ्न पाएको छैन ।
वर्तमान सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा फड्को मारेको बताउँदै आएको छ नि ?
कुनै खास फड्को मारेको छैन । भारत र चीनसँग गरिएका विगतकै सम्झौताहरुको उचित कार्यान्वयनसम्म हुन सकेको छैन । र, गलत गलत विषयको चक्करमा फसेको छ ।
२ नम्बर प्रदेशमा प्रदेश सरकारको गतिविधिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
प्रदेश सरकारले प्रहरी सम्बन्धि ऐन ल्याएको छ, विधेयक पारित गरेको छ त्यो हिम्मतको लागि त म प्रशंसा नै गर्छु । तर, प्रदेश सरकारमा रहेको मुख्य मन्त्रीको पार्टी फोरम र अर्को पार्टी राजपा ओली सरकारको समर्थनमा छ । अहिले ती पार्टीहरु पनि खास गरेर मधेसवादी पार्टीहरु विगतमा क्रान्तिकारी कुरा गर्ने तर अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको पिछलग्गु भएको छ । त्यो कुरा प्रमाणित पनि भइसक्यो ।
प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामाकरण, स्थायी राजधानी र कामकाजी भाषा सन्दर्भमा विधेयक प्रदेशसभामा नलगिरहेको अवस्थामा तपाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
प्रदेश सरकारले तत्कालै यो कुरा गर्नुपर्ने हो । हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेसको प्रदेशको संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवजीले पटक पटक सदनमा यो कुरा उठाइसक्नु भएको छ । हाम्रो पार्टीको लाईन प्रष्ट छ । प्रदेशको नाम मिथिला प्रदेश हुनुपर्छ । वा मिथिला भोजपुरा पनि राख्न सकिन्छ । दोस्रो कुरा अस्थायी राजधानी त मैले सरकारमा रहेको बेला जनकपुरलाई बनाइदिए । स्थायी राजधानीको रुपमा जनकपुरै हुनुपर्छ । जनकपुर चुरोट कारखानालाई कुनै व्यापारीको हातमा बेच्न प्रयास भएको थियो । तपाईलाई थाहा छ कि म गृहमन्त्री भएको बेला मैले चुरोट कारखानाको सम्पति राजधानीको लागि हस्तान्तरण गराएको थिएँ । त्यसैले प्रदेश सरकारले तत्काल यो कुरा टुङ्ग्याउनु पथर््यो । यो नगर्नु भनेको आलोचनाको विषय हो ।
साथसाथै म तपाईलाई यो पनि भन्न चाहन्छु कि कसैले यो प्रदेशको नाम मिथिला वा मिथिला भोजपुरा प्रदेश र राजधानी जनकपुर हुने कुरा कसैले पनि रोक्न सक्दैन । राजधानी जनकपुर बाहेक अन्यत्र लैजाने ताकत पनि कसैको छैन ।
आउँदो चुनावसम्म उहाँहरुले आफ्नो पार्टीको नाम कम्युनिस्ट नै राख्नु भयो भने पराजित हुन्छ ।
तर, प्रदेश सरकारमा रहेका सत्ता पक्ष यो प्रदेशको नामाकरण मधेस प्रदेश गर्न चाहन्छ । तपाई मिथिला वा मिथिला भोजपुरा प्रदेश भनिरहनु भएको छ । कसरी सम्भव हुन्छ ?
मधेस त भूगोल हो । झापा देखि कञ्चनपुरसम्म मधेसै मधेस हो । माथि कसैले भन्यो पहाडै राख्ने त्यो त हुँदैन । त्यो गलत कुरा हो । मधेस मात्र आठ वटा जिल्ला होइन । झापा पनि मधेसै हो । विराटनगर पनि मधेसै हो । नवलपरासी पनि मधेसै हो । कञ्चनपुर कैलाली पनि मधेसै हो । त्यसैले प्रदेश सरकारको भनाई गलत हो । अपरिपक्व हो ।
फरक प्रसंगमा कुरा गरौं, तपाई उपसभापति भएर पहिलो पटक गृहजिल्ला आउँदा आफ्नो पैतृक गाउँ हुँदै विपी कोइरालाको थातथलो दुम्जा पुग्नु भएको थियो । अब कांग्रेसमा गुट उपगुट नरहने सन्देश दिन खोज्नु भएको थियो । तर, कांग्रेस भित्र त अझै गुट उपगुट चलिरहेका छन् होइन ?
सैद्धान्तिक र बौद्धिक कुरा के हो भने गुट र उपगुट एकै पटक अन्त्य हुँदैन । मेरो भनाइ के हो भने गुट उपगुटको व्यवस्थापन हुनुपर्दछ । गुट छ भनेपनि एउटा मर्यादा र सीमामा रहनुपर्छ । जसले पार्टी, देश र जनताको फाइदा हुन सकोस् । गुटलाई रोक्न सकिन्न । तर, मेरो के धारणा छ भने नेपाली कांग्रेसको विधान संशोधनको गृहकार्य हामीले गरिरहेका छौं । विधान संशोधन गरेर महासमितिको बैठक गरेर गुटको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
नेकपाको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ, यो सरकारको आयु....
नेपालमा कम्युनिस्ट विचारधारा समाप्त भइसक्यो । कम्युनिस्ट नामको पार्टी छ । मेरो धारणा बुझ्नु हुन्छ भने कम्युनिस्ट नामको पार्टी अब यो देशमा लामो समयसम्म रहन सक्दैन । आउँदो चुनावसम्म उहाँहरुले आफ्नो पार्टीको नाम कम्युनिस्ट नै राख्नु भयो भने पराजित हुन्छ ।
कांग्रेले वर्तमान सरकारलाई घेराबन्दी गर्दै सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको प्रयास गरेको आरोप लागेको छ नी ?
अहिले हामी त्यस्तो कुनै सोंच बनाएको छैनौं । मात्र जनताको जीवनसँग सम्बन्धित सवाल र सरोकार प्रति सक्रिय भइरहेका छौं । र, पार्टीको पुर्नसंरचना गर्नको लागि संघीयसंरचना अनुसार जानका लागि महासमितिको बैठक र महाधिवेशनको तयारीमा जुटेका छौं । यो काम आफैमा पनि देशको राजनीतिक प्रणालीलाई ट्रयाकमा ल्याउनको लागि सहयोगी हुनेछ । अहिले हाम्रो प्राथमिकता त्यसैमा केन्द्रित भएको छ ।
संघीय सरकारमा धनुषा जिल्लाको दुई जना मन्त्री हुनुहुन्छ । राजेन्द्र महतो यस क्षेत्रबाट तपाईलाई पराजित गरेर निर्वाचित भए । विकास निर्माणको काम यस जिल्लामा यो सरकारले कति गर्न सफल भएको छ ?
विकास निर्माणको सवालमा मैले जेजति काम गरें, त्यस भन्दा एक सिन्का पनि काम अगाडी वढेको छैन । राजधानी जनकपुरमै हुनुपर्छ भन्ने कुरा मैले नै गरें । जनकपुरमा, धनुषामा, महोत्तरीमा, प्रदेश नं.२ मा जति पनि सडकहरु बनिरहेका छन् त्यो सबै म मन्त्री भएकै कार्यकालको देन हो । अहिले जनकपुर जयनगर रेल्वेको कुरा चलिरहेको छ, त्यो पनि नेपाली कांग्रेसकै देन हो । नेपाली कांग्रेसको समयमा भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरजी नेपाल आउँदाकै राजनीतिक निर्णय हो । माओवादी आन्दोलन र मधेस आन्दोलनका कारण रेलको विकास निर्माणको काम ढिलो भएको थियो । राजर्षी जनक विश्वविद्यालय मैले नै ल्याएँ ।
तपाईंले आफ्नो क्षेत्रका जनतालाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?
म आफ्नो क्षेत्रका जनतालाई भन्न चाहन्छु कि तपाई निराश नहुनुस् । म तपाईको साथमा छु । राजनीतिक अधिकार र विकास दुवैका लागि म तपाईहरुको साथमै छु ।
सरकार र पार्टीमा नयाँ विधि नल्याए केही दिनमा उही ...